Tababare ciyaaraha Afghanistan ayaa shegeysa in ay dalka ka carareyso kadib markii la toogtay eygeeda - Worldnews.com
Tababare ciyaaraha Afghanistan ayaa shegeysa in ay dalka ka carareyso kadib markii la toogtay eygeeda
Sahba Barakzai, xubnaha qoyskeeda iyo eygeeda oo lagu magacaabo Aseman ayaa Jimca kaste taga buuraha u dhaw gurigooda oo ku yaalla galbeedka Afghanistan.
Haseyeeshee Jimcihii hore ayaa waxaa ku habsatay arin murugo leh, kadib markii rag aan heybtooda la aqoon ay soo weerarreen qoyskaasi, kadibna toogasho ku
"Weli ma aan garan waxa ay doonayeen ragga na soo weerarray, balse waxaa suuragal ah in weerarka uu xiriir la leeyahay shaqadeeda,"
Maxay ku badbaadday haweeneydii Masaajidka la gashay Eygeeda? Qofkii lagu helo dambi ku xadgudub diinta ah sharciga waddanka Indonesia wuxuu ku ridi karaa xukun xabsi ah oo...
Maxay ku bdbaadday haweeneydii Masaajidka la gashay Eygeeda?
Haweeney maskaxda ka xanuunsan ayaa ka badbaadday inay xabsi ku gasho waddanka Indonesia ka dib markii lagu helay faldambiyeed la xiriira ku xadgudubka diinta Islaamka....
Sideed qof oo lagu toogtay dalka Jarmalka
Sideed qof ayaa lagu dilay baar ku yaala Magaalada Hanau ee dalka Jarmalka kadib toogasho ka dhacday halkaas. Booliska dalka Jarmalka ayaa BBC-da u sheegay in ugu yaraan...
Haweenaydii ka qoslisay hoggaamiyeyaasha Taliban
Gabadhii ka qoslisay hoggaamiyeyaasha Taliban Fowziya waxay sheegtay ay soo saareen shuruuc ka baxsan dhaqanka Afghanistan, sida in dumarka ay jirkooda oo dhan dharka ku...
Qaran News 2020-02-20
Jaajuusiinta, mintidiinta iyo dilalka lagu jahwareersan yahay
Toogashada laban nin loogu geystay bartamaha magalaada Kabul oo inta badan qalalaaso ka dhacaan ayaa waxay raggani ku sigteen in aanan la ogaan dilkooda. Balse nimanka la dilay ayaa waxaa la sheegay iney iyaga doonayeen in aanan la ogaan heybtooda oo waxay wateen aqoonsiyo been abuur ah. Waxa ay gudaha magaalada Kabul ka sameynayeen iyo cidda dishay ayaa ah arrin qarsoodi ah oo...
Askar Mareykan ah oo lagu dilay toogasho ka dhacday Afghanistan
WASHINGTON. D.C — Militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay maanta oo Axad ah, in laba askari oo Mareykan ah la dilay lix kalana la dhaawacay, ka dib markii askari Afghani ah oo la shaqeynayay uu rasaas ku furay. Afhayeenka ciidamada Mareykanka ee dalkaasi ku sugan ayaa sheegay, in weerarkaasi uu ka dhacay xalay degmada Sherzad ee gobolka dhanka bari ku yaalla ee Nangarhar....
Muxuu yahay gudniinka gabdhaha maxayse tahay sababta loo sameeyo?
Qiyaastii 200 oo malyan oo isugu jira gabdho iyo haween ku nool caalamka ayaa maray nooc ka mid ah gudniinka, sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay. Inkastoo si buuxda gudniinka looga dhaqmo 30 waddan oo ku yaalla Afrika iyo Bariga Dhexe, waxaa sidoo kale laga sameeyaa dalal kale oo ka tirsan qaaradaha Aasiya iyo Laatin Ameerika. Sidoo kale wuxuu ka dhex jiraa dadka soo...
Fowziya Koofi: Gabadhii ka qoslisay hoggaamiyeyaasha Taliban
Fowzia Koofi markii ay yareyd waxay ku riyoon jirtay inay mustaqbalka dhakhtarad noqoto, laakiin hamigaas wuxuu ka burburay markii ay kooxda Taliban la wareegtay talada dalka Afghanistan. Waxay xabsiga dhigeen seygeeda. Kaddib isagoo xiran waxaa ku dhacday qaaxo, markii ay sii daayeenna cudurkii ayuu u geeriyooday. Markii dambe waxay noqotay siyaasiyad, Taliban ayaana isku...
Israa\_'iil oo duqaysay ciidammo ay Iran taageerto
Diyaaradaha nooca dagaalka ee Israa'iil ayaa gantaallo la beegsaday bartilmaameedyo ka ag dhow caasimadda Dimishiq, sida ay shaaciyeen warbaahinta dowladda ee dalkaasi Siiriya. Wakaaladda wararka ee Sana ayaa sheegtay in qalabka difaaca hawadu uu iska caabbiyey inta badan gantaalladii, laakiin sideed qof ay ku dhaawacmeen duqayntaasi. Kooxaha korjoogtaynta ayaa sheegay in...
Wadaadka lagu muransan yahay ee dalka Hindiya oo Jimcihii lagu eedeeyay kufsi, ayaa lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah. Warbaahinta Hindiya ayaa sheegay in taageerayaasha Gurmeet Ram Rahim Singh ay gaari dab qabadsiiyeen kahor intaan xukunkiisa lagu dhawaaqin. Rabshado Jimcihii ka dhacay magaalada Panchkula ee waqooyiga gobolka Haryana ayaa waxaa ku dhintay ilaa 38 qof. Bandow...